यस्तो छ पत्रकार महासंघको अहिलेसम्मको ताजा मत परिणाम, कहाँ को विजयी ? — Sanchar Kendra
यस्तो छ पत्रकार महासंघको अहिलेसम्मको ताजा मत परिणाम, कहाँ को विजयी ?
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको बुधबार देशैभर एकसाथ सम्पन्न मतदानको मतगणना जारी रहेको छ । अधिकांश स्थानमा सत्ता निकट गठबन्धन र माओवादी–काँग्रेस निकट लोकतान्त्रिक–व्यवसायिक गठबन्धनको प्यानल चुनावी मैदानमा थिए ।
हालसम्म प्राप्त प्रारम्भिक चुनावी नतिजाअनुसार लोकतान्त्रिक–व्यवसायिक गठबन्धन अगाडि देखिएको छ भने सत्ता निकट पत्रकारको गठबन्धन पछि परेको छ । यस्तै प्रारम्भिक नतिजाअनुसार केन्द्रमा विपुल पोखरेल प्यानलको अग्रता देखिएको छ भने निर्मला शर्मा प्यानल पछिपछि रहेको छ ।
महिला सदस्यमा लोकतान्त्रिक प्यानलकी हरिकला अधिकारी, जनजाती सदस्यामा पनि लोकत्रान्त्रीककै राज चौधरी विजयी भएका छन् । खुल्ला सदस्यमा प्रगतिशिल साझा प्यानलका प्रकाश आचार्य मात्रै निर्वाचित भएका छन् । एमाले नेता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृहजिल्ला समेत रहेको रुपन्देहीमा पत्रकारहरुको नतिजालाई धेरैले राजनैतिक अर्थमा बुझेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरको अध्यक्षमा मणिराज गौतम नेतृत्वको पदाधिकारीको प्यानल निर्वाचित भएको छ । कुल १ सय ६१ मत खसेकोमा गौतमले १०० मतका साथ विजयी भएका हुन् । गौतमका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रेस चौतारीतर्फका उम्मेदवार बालकृष्ण अधिकारीले ५६ मत मात्र प्राप्त गर्न सफल भए ।
गौतम प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरको एलायन्सतर्फको लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । त्यस्तै, महासंघको उपाध्यक्ष पदमा गठबन्धन तर्फका उम्मेदवार ध्रुबप्रसाद अधिकारी, महिला उपाध्यक्षतर्फ सरला अधिकारी, खुल्ला सचिवतर्फ शुभलक्ष्मी विश्वकर्मा, सह–सचिव समावेशीतर्फ मन्दिरा बानियाँ (मानबी), सह–सचिव खुल्लातर्फ यमप्रसाद पौडेल (एमपी शर्मा) र कोषाध्यक्षतर्फ केशव समर्पण सुवेदी निर्वाचित भएका छन् ।
कोषाध्यक्ष पदका गठबन्धनका उम्मेदवार सुवेदीले ९९ सय मत प्राप्त गर्दा चौतारीका उम्मेदवार तिलक अधिकारीले ६१ मत प्राप्त गरे । यसैगरी, सदस्य महिलातर्फ गठबन्धनकी उम्मेदवार रुपा गुरुङ, सदस्य दलिततर्फ शान्ति सुनार सर्वसम्मत, सदस्य आदिबासी जनजातितर्फ गठबन्धनका उम्मेदवार नवराज वाइबा र सदस्य (मधेशी) तर्फ गठबन्धन उम्मेदवार आदित्य कर्ण निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेश परिषद् सदस्य दलिततर्फ कृष्णराम परियार निबिरोध निर्वाचित भएका छन् । केन्द्रीय परिषद् सदस्य (खुल्ला)मा भानुभक्त आचार्य र राजन (खुसराज) दाहाल, (महिला) मा नानीमैया विष्ट निर्वाचित भएका छन् भने केन्द्रीय परिषद् सदस्य (आदीबासी जनजाति) तर्फ सुर्वणलाल श्रेष्ठ निबिरोध निर्वाचित भएका छन् ।
म्याग्दीको अध्यक्षमा प्रकाश पौडेल निर्वाचित भएका छन् । उनले प्रतिद्वन्द्वीलाई ३ मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन् । बिहीबार बिहान सम्पन्न मतगणनाको नतिजा निर्वाचनमा पौडेलले ३० मत ल्याएका थिए भने उनका प्रतिस्पर्धी ठाकुरप्रसाद आचार्यले २७ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचित पौडेल प्रेस चौतारीका तर्फबाट उमेदवार बनेका थिए ।
ताप्लेजुङमा माधवकुमार नेपाल निकट प्रेस चौतारीले जितेको छ । प्रेस चौतारीको तर्फबाट उम्मेदवार आनन्द गौतम अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । ताप्लेजुङमा वाम–लोकतान्त्रिक प्यानल र एमाले केपी ओली निकट प्रेस चौतारी लगायतको प्यानल चुनावी मैदानमा थियो ।
इलामको अध्यक्षमा विप्लव भट्टराई विजयी भएका छन। बुधबार भएको निर्वाचनबाट उनी अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । उनले एक सय ६ मत प्राप्त गरे निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सुजन तिम्सिनाले ४८ मात्र प्राप्त गरेर हारे । त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा सुनिता खालिङ राई विजयी हुँदा सहसचिवमा प्रेम अधिकारी विजयी भए ।
त्यसैगरी सचिवमा सुशिलबावु थकाली (१४), सहसचिवमा समावेशी आदित्य रसाइली (१४), सहसचिवमा सरस्वती ल्वागुन (१४) ,कोषाध्यक्षमा फुलकुमारी नेपाली (१४) र केन्द्रीय परिषद सदस्यमा चन्द्रश्वर बास्ताकोटी (१५) मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ मुस्ताङमा कुल २८ जना मतदाता रहेका छन् ।
महासंघ एशोसिएट प्रदेश अध्यक्षमा बैकुण्ठराज पराजुली निर्वाचित भएका छन् । पराजुलीले ३९९ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा जीत हासिल गरेका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी डिबी खड्काले २७५ भोट पाएका छन् ।
यसैगरी एसोसिएट केन्द्रीय सदस्यमा गठबन्धनका विकास कार्की र स्वतन्त्र प्यानलकी कृति भट्टराई विजयी भएका छन् । ६९५ मत गणना गर्दा विकासले ३०१ मत प्राप्त गरेका छन् भने कृतिले २७४ मत प्राप्त गरेकी छन् । त्यस्तै ओमबन्धु थापाले २५७, विष्णु सुवेदीले १६१, स्मृति ढुंगानाले १३३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति तर्फको राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा राज बहादुर गुरुङले १६३ मत पाएर विजयी भएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा आरजु बिष्ट सल्यानी (१२६),कमल पौडेल अथक (१५०), गंगाधर पराजुली (१२६) र श्यामनाथ कुवरले १४२ मत पाएर विजयी भएका छन् ।